Sesawe-Your Key To An Open Web - MYSTERY ZILLION
Sesawe-Your Key To An Open Web
August 2009 edited September 2010 in Internet & Email
မြန်မာပြည်မှ Circumvention နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာမျှေ၀လိုသူများ အကူအညီတောင်းခံလာသူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်။
your-freedom ဆိုတာကိုအားလုံးသိမှာပါ။ Circumvention Software တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ အသုံးများပါတယ်။ အခုတော့ ဒီ freedom ကို မြန်မာပြည်မှ user များ အတွက်မြန်မာ User Interface နှင့် တကွ Account လုပ်စရာမလိုပဲ Username= Sesawe Password=Sesawe နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒီနေရာ တွင် download ရယူပါရန်။
အခုတော့ မရတော့ ဘူးဗျာ.. အသစ်လေးရှိရင် ပေးပါဦးဗျာ. အသုံးများသွားလို့ထင်တယ်..
အောင်မြတ်လေး။ စီးဆော..ကျောရအုံးမယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းဂျာ။ ဇော်ဂျီ၀မး်နဲ ့ကြည် ့တယ်။ စာတွေ မှားနေတယ်။ အယ် ဒါပေ ့မယ် ကမ္ဘာလုံးထဲက စာတွေ မြင်ရတယ်။
အော် ယူနီကုတ်သုံးထားတာပဲ။ ရှေ ့ရေးတွေးမျှော်ပြီးကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒါနဲ ့ယူနီကုတ်ပြောင်းလိုက်တာ... >> ဆကျလကျပွီး (https://sesawe.net/What-is-Sesawe-my.html) တွေဘာတွေဖြစ်ပြီး။ ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရေးထားတဲ ့ဟာတွေကလည်း တူရကန်တွေဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ဟင် ့
လုပ်ပါဦး မည် သို ့လုပ်ရမည်နည်း?
ဟုတ်တယ်ဗျ . . .မြန်မာလို ကောင်းကောင်းဖတ်လို့မရဘူး . .မှန်းရမ်းပြီး ဖတ်နေရတယ် . .
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်လည်း freedom ကိုအရေးတကြီးလိုချင်နေတယ် အဓိကကတော့် pfingo အတွက်ပါ ကူညီကြပါအုံး ဘယ်လိုသုံးလဲံ ဘယ် setting ကိုပြန်ချိန်းရမလဲဆိုတာက အစပြောပြပေးပါလား နောက် username, password ပါပေါ့နော် :biggrin: အရေးကြီးနေလို့ပါ မြန်မာဗားရှင်းမရလဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒေါင်းပြီးတာကို mediafire နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ Upload လုပ်ပြီးလင့်လေးသာပြန်ပေးရင်ရပါတယ်နော် (စိတ်မဆိုးဘူး အဲလိုလုပ်လို့)